Ranon'i Mandroseza : EFA NIAKATRA NY HAAVONY -
AccueilRaharaham-pirenenaRanon’i Mandroseza : EFA NIAKATRA NY HAAVONY
Raha toa ka nisy ny fanahiana ny fiandohan’ny herinandro teo, ny amin’ny mety hisian’ny fatapahan’ny famatsian-drano eto Antananarivo-Renivohitra, dia nivaha ny olana ankehitriny, vokatry ny fandraisana andraikitra ara-potoana nataon’ny fitondram-panjakana. Nihena sy niharitra avokoa ireo renirano mpamatsy rano ny faritra Analamanga ka nampiteraka ny ahiahy. Tsy ampy intsony ny rano, ka nilaza ireo teknisianina avy amin’ny Jirama fa ho tapaka ny famatsiana rano raha toa ka tsy misy ny rotsak’orana mandritra ity faran’ny herinandro ity. Novahaina kosa ny toho-drano ao Tsiazompaniry ka efa tonga soa aman-tsara ao Mandroseza ankehitriny ny rano, ary efa miakatra ny rano ao an-toerana. Nisy ihany koa ny fametrahana fotodrafitrasa ho famokarana rano ao Mandroseza izay vita hatramin’ny 78% ankehitriny, entina hanampiana ny famatsian-drano eto Antananarivo. Ny ao Ankadivoribe kosa no hamatsy ny faritra Atsimo eto Antananarivo, ny fotodrafitrasa any an-toerana kosa izay efa vita hatramin’ny 75% ankehitriny. Ny ao Ankadivoribe izay misintona ny avy ao Sisaony. Mifanampy noho izany ny ao Mandroseza sy ny ao Ankadivoribe, mamaha ny olan’ny famatsian-drano.
Efa niakatra ny rano…
Efa mahatratra 1 m sy 50 ny halalin’ny rano ao Mandroseza, raha ny nojerena teny an-toerana omaly tolakandro tokony ho tamin’ny 12 ora. Efa mihoatra ny refy ambany indrindra, 5 cm sisa no tsy ampy omaly hariva, efa tratra kosa ny maridrefy ilaina entina hamatsiana rano an’Antananarivo. Maharitra mandrapiavin’ny orana ny rano misy ao an-toerana, izay afaka hamatsy ny tanànan’Antananarivo iray manontolo. Manodidina 175 000 m3 hatramin’ny 180 000 m3 isan’andro ny rano ilain’ny mponin’Antananarivo. Mamokatra 8000 m3 isan’ora kosa ny ao Mandroseza na koa rano 192 000 m3 hatramin’ny 200 000 m3. Ampy ny rano ary tsy hisy ny fatapahan-drano mandrapiavin’ny orana izay vinavinaina hilatsaka ara-dalàna amin’ny fiafaran’ity volana Janoary ity. Nisy ny fidinana hifotony teny Mandroseza izay nataon’ireo teknisiana avy amin’ny Jirama omaly tolakandro, ny fizahana teny an-toerana no nahafahan’izy ireo milaza fa mivaha ny olana eo amin’ny famatsian-drano ho an’Antananarivo-Renivohitra. Efa fotodrafitrasa roa lehibe izao no napetraka hanampiana ny famatsian-drano eto Antananarivo, ny ao Mandroseza izay hamatsy ny afovoan-tanana, sy ny any amin’ny faritra Avaratra misy an’i Sabotsy Namehana sy ny any Faralaza. Ny ao Ankadivoribe kosa izay hamatsy rano ny tapany Atsimo rehetra eto Antananarivo.
Efa nampoizina ary efa nosoratana teto amin’ny gazety fa tsy afaka hiara-dia na oviana mihitsy izany Andry Rajoelina sy Hajo Andrianainarivelo izany satria samy te ho lohany. Fandrebirebena saim-bahoaka daholo ireny fihetsiketsehana ivelany nasehon’ny ARMADA ...Tohiny